Ndepụta nke usoro ekesa n'efu | Site na Linux
Ndepụta nke nkesa systems n'efu
Isaac | | Nkesa, Apụta, GNU / Linux
Sistema nọchiri SysV Init de facto na nkesa GNU / Linux dị ugbu a. N'etiti mgbanwe ahụ, distros ndị ọzọ ahọrọlarị maka sistemụ gbanwere dịka Upstart dabere na init daemon, nke dị na Ubuntu, ChromeOS, openSUSE, Debian, Red Hat, Fedora, wdg.
Usoro ohuru di otutu karie ihe ochie, ihe na adabaghi ​​nke oma na Unix Philosophy nke itinye mmemme di mfe. E wezụga nke ahụ, eziokwu ahụ ọ na-edebe ihe ndekọ na ọnụọgụ abụọ enweghị mmasị na ọtụtụ ma. Agbanyeghị, ekwesịrị ikwu na o meela ụfọdụ ọrụ ọfụma yana ọ nwekwara uru ya. O sina dị, ka na-ewe ọtụtụ ndị ọrụ iwe ndị ka na-ahọrọ usoro kpochapụwo ...
Maka ihe niile ndị chọrọ ịgbapụ na sistemụ ma rapara na kpochapụwo, ị kwesịrị ịmara na e nwere ọtụtụ distros ndị ka na-enweghị usoro ihe ọzọ a. Ma ọ bụghị naanị Devuan (ụdị dị iche iche nke Debian na-enweghị sistemụ nke na-ewu ewu).
Lee, m na-egosi gị ihe na-atọ ụtọ ndepụta nke nkesa na-enweghị usoro:
Devuan: ọ bụ n'ụzọ bụ isi Debian na-enweghị systemd, na-aga "otu nzọ azụ" n'echiche a iji kpochapụ ndị ọrụ ya nke usoro ihe ọhụrụ a. N'ezie, aha ya sitere na njikọta nke okwu Debian + VUA (Veteran UNIX Admins).
Linux Alpine: bụ ihe ọzọ na nkesa na-enweghị systemd ị nwere ike ịchọta. Ọ dabere na musl na BusyBox, ka ọ dị mfe ma dị nchebe.
Nkọwapụta- Nke a na-esonye na nkesa dị iche iche dị na Arch Linux. A na-ekesa ngwa ngwa na-ekesa ọsọ na enweghị sistemụ.
Uzo: ọ bụ otu n'ime ndị nkesa na-adịghị ahụkebe. Ọ bụghị ndụdụ nke otu dị, mana emere ya site na ncha, yana njikwa ngwugwu nke ya ma jiri SysV init. Ọ bụ nhọrọ dị ike, mana ọ nwere ike ọ gaghị akachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mfe karị ma ị nweghị ahụmịhe. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe dị iche, ọ bụ nnukwu nhọrọ.
Slackware: kpochapụwo maka linuxers "ochie". Otu n'ime nkesa ndị kachasị ewu ewu na nke gbagwojuru anya, yana Gentoo na Arch. Mana dị ka ndị a, ọ na-agbanwe agbanwe, na-adị ike ma dịkwa oke mma maka ndị ọrụ ahụ tozuru oke. Na nke a ọ na - eji sistemụ ederede dị egwu, ọ bụghị SysV init, mana ụdị BSD dịka nke ụfọdụ ndị * BSD ji.
Gentoo y Funtoo: ọzọ nke distros na-eche na ndị ọkachamara nwere ahụmahụ n'ihi nsogbu ya, mana ha dịkwa ebube. Nke a distro na-anya site onwe ya systemd iji Meghe.
GUIX: ọzọ nke nkesa nke na-ekpochapụ usoro, na nke a GNU Daemon Sherped ejiri ya dị ka usoro init. Ọ bụghị ntụpọ dị mfe iji, ọ na-ejikwa sistemụ njikwa azụmahịa azụmahịa.
Linux antiX: ọzọ nke nkesa sistemụ n'efu, ma dabere na Debian.
OKWU: bụ distro ọzọ dabere na ederede BSD na ezigbo ọkụ.
PCLinuxOS: Ọ bụrụ na-amasị gị Mandrake distro, mgbe ahụ i kwesịrị ịgbalị a ndụdụ nke ka na-ekwusi ike na SysV init.
Linux Linux: oru ngo di obere nke na-acho iru ugwu ato nke o dabere na ya: Ibu POSIX zuru oke, ndakọrịta ihe owuwu otutu, na ime mgbanwe.
Obarun: ọzọ dabere na Arch, na ihe niile pụtara, yana ilekwasị anya na nghọta. N'okwu a, ọ na-eji usoro dị iche akpọrọ 6s kama sistemụ.
Linux KISS: aha ya na-enyeworị echiche nke ihe ọ bụ, ya bụ, ọ na-agbaso ụkpụrụ ahụ Kiss. Ọ bụ ọrụ nwere onwe ya, sitere na isi mmalite, ya na BusyBox na sistemụ mmalite ya.
AKWKWỌ- Ọ na-enweghị ike-atụle otu n'ime nkịtị distros ma, ma ọ bụ na si sistemụ. Ọ dabere na Gentoo ma jiri nhọrọ abụọ dị ka ndị nnọchi maka sistemụ: openRC ma ọ bụ s6.
Ọ bụrụ na ị bụghị aka ochie na Linux ụwa ma ọ bụ na ịchọghị nsogbu, ana m akwado nke ahụ ọ masịrị gị na Devuan ịnọ… Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ dị elu ma ọ bụ chọọ ịnwale ndị ọzọ, ị nwere onwe gị ịhọrọ nke ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ndepụta nke nkesa systems n'efu
Echere m na a ga-agbakwunye ya na MXLinux n'ihi na ọ bụ na ndabara anaghị arụ ọrụ na sistemụ, ọ bụ ezie na ọ na-abịa arụnyere ma ọ bụrụ na mmadụ kwesịrị ịmalite na ya, mana ọ ga-eme site na nhọrọ dị elu nke Grub ma jiri aka ya gbanwee ya.
otu n'ime ụfọdụ dijo
Mụ onwe m na-eji Artix na OpenRC, enwere m okpukpu atọ na Arch (ewepụbeghị ya ma ọ na - enyere m aka iji tụnyere) na Windows 10 maka egwuregwu.
M na-eji OpenRC n'ihi na ọ dị ka o tozuru oke, dị mfe iji yana ọ dị m ka inwe ọdịnihu karịa ebe ọ na-egosi na ụfọdụ BSD ga-ejikwa ya.
Ihe dị mma ịnwe Artix na Arch na otu laptọọpụ bụ na ị nwere ike iji arụmọrụ, oge buut, wdg. Ihe m nwere ike ikwu bụ na Artix na-enye Arch nnukwu ihe ọ bụla ma e wezụga mmechi kọmputa nke na-agba ngwa ngwa na Arch.Mgbe ọ bụla ihe ọ bụla na-arụ ọrụ ka mma, ọbụlagodi Plasma na-amalite ọsọ ọsọ ọsọ site na nbanye ruo mgbe ihe ngosi pụtara. tebụl. Enwere m otu ihe ahụ ma ma ọ bụrụ na achọpụtara m na mmelite ọ bụla nke systemch Arch ọ na-akawanye njọ, ọkachasị oge buut nke gbagburu site na otu afọ ruo n'akụkụ a. Ọ bụ eziokwu na ntanetị Intel (Meltdown, Specter, wdg) na-emetụta ma ha ga-emetụta Artix na ọdịiche dị n'etiti otu na nke ọzọ dị nnukwu.
Ezigbo nlezianya nyocha na ekele maka nyocha a.
Na mgbakwunye, gbakwunye "Knoppix" na ndepụta nke nkesa na-enweghị Systemd. Ezigbo distro ma ọ bụrụ na e nwere.
@ unodetantos daalụ ...
Kedu ihe dị iche na otu na nke ọzọ na nke kachasị mma yana n'akụkụ ọ ka mma.
Ha bụ otu ihe niile ma e wezụga init. Ha nwere otu ngwugwu, n'ezie Arch repos (ma e wezụga isi) nọ na Artix mana n'echiche m, ha dị ka ndabere nke nkwụghachi ha. Aghọtara m na ha na-eme atụmatụ na oge dị mkpirikpi (ọ bụrụ na oge na ihe onwunwe na-enye ya ohere) iji nwee njikwa zuru oke nke nkwụghachi ma si otú ahụ enweghị ndị Arch na nhazi ahụ. Echere m na nke a bụ na ọ bụrụ na ha adabere na ịdabere na usoro (nke a bụ echiche onwe onye) ebe ọ bụ na ha ewepụla usoro ọ bụla ọzọ, ị gaghị ahụ shim ma ọ bụ libsystemd-dummy ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
Banyere nchekwa, n'ihi na otu dị ka Arch, dabere n'otú i si chebe ya, ị ga-enweta ya, ọ bụ ezie na enweghị usoro, ọ ga-ejide n'aka na ndị na-echekwa ọnọdụ dị iche iche na-ewere okwu banyere nchekwa nke ọma karịa ndị nke usoro ma yabụ m were ya maka enweghị nkwanye ùgwù. ịnọdụ naanị ya n'ihi nke a dị nchebe.
Site n'ụzọ, ị nwekwara ike ịwụnye nchịkọta AUR n'enweghị nsogbu, etinyewo m nsogbu ole na ole na efu.
Ọ bara uru ikwu na usoro init bụ S6, ọ bụghị 6S. N'ihe banyere Artix, ọ na-enye nsụgharị 3 dị iche iche dị iche iche: openrc, S6 na runit.
SEGA chọrọ ịghachite igwe Arcade ya n'etiti "ị fogs"
Arụpụtaghị ihe kacha: Otu esi eji ngwa Brain eme ihe omimi?